जीवनशैली तथा राेचक तथ्य | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
काठमाडौं । हिन्दूधर्मालम्बीहरूले आज आराध्यदेव शिवको पूजाआराधना गरी महाशिवरात्रि पर्व मनाइँदैछ । शिवजी उत्पत्ति भएको रातका नामबाट नामकरण भएको यो पर्व कालरात्रि, मोहरात्रि, सुखरात्रि र शिवरात्रि नामक चार प्रमुख रात्रिमध्ये एक पवित्र पर्वका रूपमा शिव पुराणलगायत ग्रन्थमा वर्णित छ…
यो मेरो आफ्नै समस्या हो । म र मेरी श्रीमतीबीच राम्रो सम्बन्ध छ । हामीले प्रेमविवाह गरेका हौं । हाम्रो…
बालबालिकालाई आफ्ना आमा-बुबाले जस्तो मायाप्रेम अरु कसैले गर्न सक्दैन । तर यही माया-पे्रम गर्ने क्रममा कुनै पनि कुराको लागि दवाव दिनु भनेको गलत कुरा हो । के तपाईं पनि त्यस्ता अभिभावकहरुमा पर्नु हुन्छ, जसले आफ्ना बच्चालाई अनावश्यक दवाव दिने…
काठमाडौं । १२ वर्षमा खोलो पनि फर्किन्छ भन्छन्। हो, लोकगायक रामप्रसाद खनाल अमेरिका छिरेको ठ्याक्कै १२ वर्ष भयो। अब उनले नेपाल बसाइ विस्तारै बढाउने भएका छन्। उनको बसाइ अमेरिकामा छ तर मन भने पूरापूर नेपालमै। मातृभूमिको मायाले उनी अब…
आपसमा यौन सम्पर्क गर्दा महिलाले छुट्टै आवाज निकाल्छन् । आवाज त निकाल्छन् तर किन निकाल्छन् त यस्तो आवाज यो सबैका लागि रोचक विषय हुन सक्छ । आखिर अधिकांश महिला किन यस्तो आवाज निकाल्छन् ? के यस्तो आवाज आनन्दको अभिव्यक्ति…
पुरुषले महिलाका कुरा केवल बोलीबाट…
मेरो विवाह भएको पाँच महिना भयो र यौनसम्पर्क पनि भैरहेको छ, तर कुनै–कुनै बेला लिंग योनिमा प्रवेश गराउन गाह्रो हुन्छ । त्यस्तो स्थितिमा लिंग हल्का तन्किएजस्तो भएर तलतिर जान्छ । यसले लिंगमा केही असर गर्छ कि गर्दैन ? अर्को…
बैंकको ढिलासुस्तीले उखु किसानले समयमै पाएनन् भुक्तानी6views